‘कम्युनिष्ट बिग्रिए भने कुहिएको अण्डाभन्दा बढि बिग्रिन्छ भन्थे, माधव नेपालको त्यही हविगत हुँदैछ’- सूर्य थापा -
प्रकाशित मिति : २०७८, १४ भाद्र सोमबार
नेकपा (एमाले) का युवा नेता सूर्य थापाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानबमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले सभामुख सापकोटा र निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी कानूनी उपचारमा जाने पनि स्पष्ट पारे ।
शुक्रबार नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सभामुख सापकोटालाई आफ्नो पार्टीले उनको आफ्नो धरातल देखाइदिने कुरा गरेको हो पनि बताए ।
प्रस्तुत छ नेता थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय समिती बैठकले सभामुखविरुद्ध सशक्त रुपमा जाने निर्णय किन गर्यो ?
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा गर्नुभएको कामहरु तपाईँलाई थाहा नै छ । नेकपा एमालेले भदौ १ गते नै साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयानुसार भनेर १४ जना सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्न अनुशानहिन, अराजक, पार्टी बिरोधी काम गरेको भनेर पदमुक्त गर्न भनेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन उहाँले आजसम्म गर्नुभएन । निर्वाचन आयोगलाई चाँही पदमुक्त गर्न पत्राचार गरिएको भनेर चिठी पठाउनुभयो ।
एमालेले पदमुक्त गर्न भनेर भनेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । तर, उहाँ नेकपा माओवादीको एउटा गुरिल्ला र छापामारका रूपमा सक्रीय रहनुभयो । उहाँ सार्वभौम संसद्को सभामुखको रूपमा भूमिका खेल्नुभएन । त्यो पदको गरिमा र पद अनुसारको आचरण प्रदर्शन देखाउन सक्नुभएन । उहाँ प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ताको रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । हाम्रो अध्यक्षले पटक–पटक भन्दै आउनुभएको छ ।
टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु साह र लेखराज भट्टका हकमा प्रचण्डले चिठी पठाउनेबित्तिकै केन्द्रीय समितीको बैठकबिनै उहाँले संसद्मा उहाँहरुलाई पदमुक्त गरेको पत्र सुनाउनुभयो । तर, नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबमोजिम आफ्ना पार्टीका सांसदबारे गरेको निर्णय उहाँले कार्यान्वयन गर्नुभएन । किन गर्नु भएन ? यो प्रश्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग हाम्रो पार्टीले कानूनी र सबै खालका
उपायहरुको अबलम्बन गर्ने र उहाँलाई आफ्नो धरातल देखाइदिने कुरा गरेको हो ।
त्यो कुरा गलत हो । केपी शर्मा आलीले राति संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउनुभएको छैन । उपेन्द्र यादवका सांसदहरुले हामीलाई अफ्ठ्यारो भयो भनेपछि केन्द्रीय समिती र संसदीय दलको ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था थियो, त्यसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर कानुनसम्मत् रुपमा त्यो अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो ।
तर, सबैको सुझाबअनुसार अध्यादेश फिर्ता भयो र कुनै पार्टी फुटेनन् ।
उहाँले सहयोग गर्ने/नगर्ने उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । उहाँ त केन्द्र सरकारबाट केपी शर्मा आलीलाई हटाई छाड्ने, लुम्बिनीबाट शंकर पोखरेल र गण्डकीबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउने माग चार वर्षदेखि गर्नुभयो । हटाएरमात्र छाड्नुभयो । नहटाउदाँसम्म श्वाँस फेर्नुभएन । कम्युनिष्ट बिग्रिए भने कुहिएको अण्डाभन्दा बढी बिग्रिन्छ भन्थे माधव नेपालको त्यही हविगत हुँदैछ ।
नेकपा एमालेका बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री बनाएका हुन र उहाँहरुले टिकाउँछन् । त्यहीअनुरुप उहाँहरुले काम गर्नुहुन्छ ।